३३औँ स्थापना दिवस अनलाईनबाट मनाउँदै नेफ्सकून-लईभ « Sahakari Nepal
प्रकाशित मिति : 16 August, 2020 5:21 am
३२ साउन, काठमाडौँ । नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ लि. नेफ्सकूनले आज विभिन्न कार्यक्रम सहित ३३औँ स्थापना दिवस मनाइरहेको छ । नेफ्सकूनका फिल्डकार्यालयहरूमा केक काटेर स्थापना दिवसको शुभकामना आदानप्रदान गर्ने र केन्द्रिय कार्यालयबाट औपचारिक कार्यक्रम गरि फेसबुक लाइभ गरिदै छ । भूमिव्यवस्था, सहकारी तथा गरीवि निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले ३३औँ स्थापना दिवसको समुद्घाटन गर्नु भयो ।
वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले स्वागत मन्तव्य व्यक्त गर्नुभयो ।
नेफ्सकूनका अध्यक्ष परितोष पौड्यालले सम्वोधन गर्नुभयो ।
नेफ्सकूनको आधारशिला कार्यक्रमको शुभारम्भ मन्त्री अर्यालद्वारा भयो ।
राष्ट्रिय सहकारी महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष केशव बडालले साकोस आवाज अनलाईन संस्करणको शुभारम्भ गर्नुभयो ।
सिटिईभिटि बाट मान्यता प्राप्त ‘सहकारी व्यवस्थापक’ कोर्षको समुद्घाटन तथा उक्त पाठ्यक्रमको पाठ्यपुस्तक विमोचन विभागका रजिष्ट्रारले गर्नुभयो ।
नेफ्नेसकून व्यवस्थापनद्वारा नेफ्सकूनको बारेमा श्रव्यदृशय प्रस्तुतिकरण हुँदै ।
नेफ्स्कूनका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रकाशप्रसाद पोखरेलले नेफ्सकूनको विगत, वर्तमान र भविश्य शिर्षकको प्रस्तुतीकरण राख्नुहुँदै ।
नेफ्सकूनका निवर्तमान अध्यक्ष डि.बी. बस्नेतद्वारा नेफ्स्कून सम्मान पुरस्कार घोषणा हुँदै ।
नेफ्सकुन सर्वोत्कृष्ट साकोस किसान कल्याण साकोस, सुनसरी
नेफ्सकून सर्वोत्कृष्ट साकोस (महिला)ः नीलकण्ठ महिला साकोस, धादिङ्ग
प्रदेश नं. १- डाँफे साकोस, झापा
प्रदेश नं. २- सगुन साकोस, सर्लाही
बागमती प्रदेशः ज्योती मिर्मिरे सामुहिक साकोस, काभ्रे
गण्डकी प्रदेशः भिमकुल साकोस, गोरखा
प्रदेश ५ः हाम्रो मध्यवर्ती राधाकृष्ण साकोस, बर्दिया
कर्णाली प्रदेशः जनकल्याण साकोस, सुर्खेत
सुदुरपश्चिम प्रदेशः जनज्योती साकोस, कञ्चनपुर
उत्कृष्ट जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी संघ ः काठमाडौँ जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी संघ लि. KASCCUN
नेफ्स्कून राइफाईसन क्रेडिट युनियन पुरस्कारः अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन, नेपाल कार्यालय
नेफ्स्कून प्रशंसा पुरस्कारः
सफ्टवेयरः स्वस्तिक साकोस, सर्लाही
उत्कृष्ट बचतकर्ताः पोखरा रोयल साकोस, पोखरा
उत्कृष्ट शेयर खरीदकर्ताः लुमबिनि साकोस रुपन्देहि
साकोस लघुवित्तः छायाँनाथ साकोस, मुगु
सामुदायिक उत्तरदायित्व बहन पुरस्कारः सहारा नेपाल साकोस, झापा
महामारीमा उत्कृष्ट सेवा प्रदान गरेबापतको सम्मानः जनउत्थान साकोस, रुपन्देही
साकोस एकीकरण अभियानमा उत्कृष्टः सीवाईसी साकोस, वाग्लुङ्ग
नेफ्स्कून उत्कृष्ट फिल्ड कार्यालयः नेफ्सकून चावहिल फिल्ड कार्यालय
संस्थापक अधयक्ष पुरस्कारः
घनश्याम खतिवडा, मोरङ
राधा सिंतान, मकवानपुर
नेफ्स्कून अग्रज व्यक्तित्व सम्मानः
पार्वती खाँड राई, धादिङ
श्यामबहादुर श्रेष्ठ, काठमाडौँ
नेफ्सकून विद्वता पुरस्कारः नवराज सिंखडा, पि.एच.डि.
नेफ्सकून पत्रकारिता पुरस्कारः काजी श्रेष्ठ, सहकारी खबर डटकम, काठमाडौँ
नेपालको साकोस अभियानको उत्कृष्ट व्यवस्थापकः ईश्वर न्यौपाने, मिलिजुली कालिञ्चोक साकोस, दोलखा
नेफ्स्कून उत्कृष्ट कर्मचारीः मनोज बुढाथोकी, अन्तरलगानी अधिकृत, केन्द्रीय कार्यालय
नेफ्सकूनका महासचिव दामोदर अधिकारी कार्यक्रम संचालन गरिरहनुभएको छ ।
सहकारी विभागका रजिष्ट्रार डा. टोकराज पाण्डे शुभकामना मन्तव्य राख्दै हुनुहुन्छ । रजिष्ट्रार पाण्डेले सहकारीको स्तरीकरण र दिगो विकासको कुरा गरिरहँदा सहकारीका सदस्यहरू अन्यायमा पर्न नहुने धारणा राख्नुभयो । पाण्डेले नेफ्सकूण युवा नेतृत्वले ओतप्रोत नेफ्सकूनले महत्वाकांक्षी लक्ष्यहरू लिएको छ भन्दै ती लक्ष्य हासिल गर्ने गरि कार्य गर्ने सुझाव दिनुभयो ।
भूमिव्यवस्था सहकारी तथा गरीवि निवारण मन्त्रालयका सचिव टेक नारायण पाण्डेले शुभकामना मन्तव्य राख्दै हुनुहुन्छ । सहकारी अभियान सहकारी मन्त्रालय भन्दा जेठो भएको र अभियानबाट मन्त्रालयले सिक्ने अवसर पाएको उहाँले बताउनु भयो । केन्द्र, प्रदेश र जिल्ला तहमा रहेका संघहरूले सर्वसाधारणको जीवनस्तरमा परिवर्तन हुन सके नसकेको मूल्यांकन गर्नुपर्ने र त्यसले मात्र सहकारीको योगदानको सहि मूल्यांकन हुने पाण्डेको भनाई छ । आर्थिक क्रियकलापलाई चलायमान बनाउन बचत ऋण सहकारीको ठूलो भूमिका रहेको र यो अभियानलाई ग्रामिण तहसम्म पुर्‍याउनु पर्ने पाण्डेको भनाई छ । पाण्डेका अनुसार सहकारीको स्थापना र सञ्चालन सहकारीको मर्म अनुसार नभएको हुँदा संस्थाहरूले के गरिरहेका छन् भन्ने नियमित अनुगमन र नियमन गरिन जरूरी छ ।
राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष मीनराज कँडेल शुभकामना मन्तव्य दिनुहुँदै । कँडेलले नेफ्सकूनका संस्थापक अध्यक्ष भोजराज घिमिरेलाई स्मरण गर्नुभयो । सहकारी संस्थाहरूले उत्पादनमा जाने बाटो खोल्नुपर्ने धारणा राख्दै कुल पूँजिको १० प्रतिशतसम्म उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था गर्ने र सदस्यहरूलाई उत्पादनमूलक कार्यमा लगाउनुपर्ने बताउनुभयो । संघहरूमा राखिएको रकमलाई तरलताको गणना गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने बारे मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
राष्ट्रिय सहकारी महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष केशव बडालले शुभकामाना मन्तव्य राख्नुहुदै । नेपालमा सहकारी बढि भएको ठाउँमा बहुआयामिक गरीबि कम र सहकारी कम भएको ठाउँमा बहुआयामिक गरीबि बढि भएको विचार राख्नुभयो । धेरै सहकारी संस्थाका सञ्चालकहरूले कुनै पनि सेवासुविधा नलिई संस्थामा सेवा गरिरहेको बडालले बताउनुभयो ।
प्रमुख अतिथि मन्त्री अर्यालले शुभकामना मन्तव्य राख्दै हुनुहुन्छ । मन्त्री अर्यालले सरकारले सहकारी अभियानलाई नीतिगत तवरबाट थुप्रै कुरा दिएको र सहकारी अभियानले पनि त्यस अनुरूप राज्यको अपेक्षा पूरा गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । सहकारी क्षेत्रलाई छाता संगठनलाई सुदृढिकरण गर्नुपर्ने र विपन्न र सिमान्तकृत समुदायको हितका लागि संस्थाहरूलाई परिचालन गर्नुपर्ने मन्त्री अर्यालले बताउनुभयो । लक्षित समुदायले आफूलाई सहकारीले सहयोग गर्न सक्छ भन्ने भरोसा दिलाउने गरि सहकारी क्षेत्रले काम गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । सबै जनतालाई उत्पादनमा जोड्ने, समाजवादमा पुग्नका लागि अग्रसर हुने र गरीब जनतालाई वित्तिय सेवाको पहुँच पुर्याउने गरि सहकारीले काम गर्नुपर्ने अर्यालले बताउनुभयो । विभागको सर्वेक्षण अनुसार १ लाख मानिस सहकारी क्षेत्रमा प्रत्यक्ष रोजगारीमा छन् । तल्लो तहदेखी मानिसहरू सहकारीमार्फत केहि गर्न जुर्मुराएका छन् । बहुसंख्यक महिलाहरू सहकारीमा जोडिएकोले जागरण र आत्मनिर्भरता बढेको छ । सहकारीको विकासको यो चरणमा कुनै निराशा आउने किसिमका कामहरू सहकारी क्षेत्रबाट भएनन् भने सहकारीमार्फत समृद्धि ल्याउने राज्यको अपेक्षा पूरा हुन्छ ।
नेफ्स्कूनका अध्यक्ष परितोष पौड्यालले मन्तव्य राख्दै हुनुहुन्छ । समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीलाई सार्थक बनाउनका लागि साकोस क्षेत्रले उल्लेख्य भुमिका खेल्ने पौड्यालले बताउनुभयो । यसका लागि सदस्आयको र्थिक विकास र गुणस्तरीय जीवन यापनका लागि केन्द्रित भएर काम गर्ने उहाँले प्रतिबद्धता जनाउनु भयो । स्वनियमन र सुशासनलाई बलियो बनाउने प्रविधि र औजारहरू नेफ्सकूनले तिब्र रुपमा प्रयोग गरिरहेको हुँदा हिजो जस्तो संस्थाहरूमा सुशाषनका समस्या नआउने दाबी गर्नुभयो । स्थानीय तहमा सहकारीको अनुगमन र नियमन गर्ने संयन्त्र तयार नभइसकेकोले अन्यौल उत्पन्न भएको उहाँले बताउनुभयो । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको सहकारी अभियान परिचित भएको र अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाहरूसँगका थुप्रै सहकार्यका अवसरहरू सिर्जना भएको जानकारी दिनुभयो ।
औपचारिक कार्यक्रमको समापन गर्दै ३३ औँ स्थापना दिवसका अवसरमा नेफ्सकूनका अध्यक्ष परितोष पौड्यालले केक काट्नु भयो ।